MomentFeed: Xalalka Suuqgeynta Mobaylka ee Goobista ah ee Raadinta iyo Bulshada | Martech Zone
Sabtida, Diisambar 19, 2015 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Haddii aad suuq ka tahay silsiladda makhaayadaha, ama ka badan kuwa xayeysiiska ah, ama silsiladda tafaariiqda ah, suurtogal kama ahaan kartid inaad ka shaqeysid suuq kasta iyo dhexdhexaad kasta si aad u horumariso goob kasta oo aan lahayn nooc ka mid ah nidaamka. Astaamahaagu inta badan lama arki karo raadinta maxalliga ah, indhoolayaal ka qayb qaadashada macaamiisha maxalliga ah, ha haysan qalab aad ku abuuri karto xayeysiisyo maxalli ah oo la xiriira, badanaana ma maareeyaan joogitaanka warbaahinta bulshada oo dhammaystiran.
Ku darso dadaalka qaar ka mid ah isbeddelada habdhaqanka macaamiisha:
80% macaamiisha ayaa doonaya xayeysiisyada ku habboon meesha ay ku yaalliin
Waxaa jira in kabadan 1.7 billion xisaabaadka mobaylka ee firfircoon #social
90% macaamiisha ayaa sheegaya in dib u eegista internetka ay saameyn ku yeelanayaan go'aamada iibsiga
88% macaamiisha ayaa adeegsada raadinta moobiilka si ay u helaan badeecooyin iyo adeegyo u dhow
Waa duufaanta ugu fiican. Waxaad ubaahantahay soo-gaadhis heer gobol ah oo loogu talagalay macaamiisha maxalliga ah. Noocyada silsiladaha waaweyn iyo kuwa xayeysiinta ah, ku luminta natiijooyinka raadinta maxalliga ah muddo dheer ayay dhibaato ahayd sababtoo ah tirada badan ee goobta iyo xogta ganacsi ee ay u baahan yihiin inay ilaashadaan. Ku dar tan xaqiiqda ah in calaamadaha bulshada, sida qiimeynta iyo dib u eegista, ay saameyn ku leeyihiin natiijooyinka raadinta, iyo xaddiga macluumaadka u baahan in lala socdo meherad leh boqolaal ama kumanaan goobood waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn.
Si tan loo xaliyo, ganacsiyo badan oo waaweyn iyo wakaaladooda warbaahineed, sida Applebee's, Jamba Juice, iyo The Coffee Bean, ayaa u jeestay MomentFeed, si loo fududeeyo maaraynta iyo tayaynta xogta dukaanka maxaliga ah ee muhiimka ah sida cinwaanada, saacadaha hawlgallada, dib u eegista iyo sawirrada.
Mashruuca MomentFeed wuxuu isku xiraa noocyo badan oo kala duwan macaamiisha maxalliga ah ee bulshada ay u adeegaan, taasoo u oggolaanaysa ganacsiyada inay keenaan suuq geyn ku habboon oo ku habboon kumanaan goobood.
Madal Suuqgeynta MomentFeed
Barmaamijka MomentFeed wuxuu kakooban yahay xalalka raadinta iyo helitaanka, warbaahinta bulshada, warbaahinta lacag bixinta iyo khibrada macaamiisha.
Raadinta iyo Daahfurka - MomentFeed wuxuu kuu sameeyaa dhamaan xiriiriyeyaasha muhiimka ah ee SEO-ga ah adigu si otomaatig ah, sameynta iyo dayactirka nidaamka deegaanka ee kor u qaadaya raadintaada maxalliga ah isla markaana kalsooni siinaysa goobahaaga dhammaan barnaamijyada.
Warbaahinta Lacagta Bixisay - hal olole qaran u rogo ololeyaal shaqsiyeed gaar ah oo loogu talagalay goob kasta si fudud iyadoo la adeegsanayo qasabno yar oo kuu oggolaanaya inaad ka faa'iideysato waxyaabaha ku jira shabakadaha bulshada ee kala duwan.
Maareynta Warbaahinta Bulshada - in-app lagu daabaco kanaallada sida Facebook, Instagram, Foursquare, Google+ iyo Twitter. Sida sawirada oo uga jawaab macaamiisha miisaan ahaan. Geli waxyaabo firfircoon si aad u abuurto ku-habboonaanta maxalliga ah una wadaagto waxyaabaha ku jira.
Khibrada Macaamilka - qiimeynta guud iyo dib u eegista ka socota Facebook, Foursquare, Google, iyo Yelp oo u oggolaanaya sumadaha inay si hufan ula socdaan ugana jawaabaan macaamiisha. Isticmaalayaashu waxay ka soo jiidan karaan dib u eegista goobaha keli ah, waxay ku kala saari karaan qiimeynta xiddigaha, waxayna ugu jawaabi karaan si gooni gooni ah ama koox faallooyin ah.
MomentFeed waxay ku dhawaaqday inay sii wado awoodeeda sidii la ansixiyay Ganacsiga Google API Partner. Iyadoo loo marayo iskaashigan, MomentFeed waxay xitaa sifiican uga caawin kartaa magacyada qaranka inay horumariyaan natiijooyinka raadinta maxalliga ah iyo ololayaasha Google Ads iyadoo la isku darayo liisaska Google My Business iyo awoodaha jira ee juquraafi ahaan jira.
Ganacsiga Google (GMB) waxay u oggolaaneysaa ganacsiyada inay abuuraan oo ay maareeyaan liisaska ganacsi ee bilaashka ah ee shabakadda Google, sidaa darteed macaamiisha waxay si fudud ku heli karaan goobaha bakhaarka marka ay raadinayaan Google Search iyo Khariidadaha. Marka lagu daro awoodaha jira ee juquraafi ahaaneed ee MomentFeed, macaamiisha waxay xaqiijin karaan saxsanaanta weyn, is waafajinta iyo macnaha guud ee deegaanka ee qof kasta, dukaanka maxalliga ah marka, tusaale ahaan, macaamiisha ay raadiyaan ereyo sida "kafee," "dukaan sandwich" ama "ATM oo aniga ii dhow. ”
MomentFeed sidoo kale waa Shuraakada Instagram, Laba-geesoodka Iskaashatada Ganacsiga iyo sidoo kale xubin ka mid ah barnaamijka Iskaashiga Suuqgeynta Facebook (FMP)
Tags: silsiladFacebookdib u eegista facebookafar geesooddib u eegis afar geesood ahtaasogoogle ganacsigeygadib u eegista googlegoogle +Instagramraadinta maxalliga ahololeyaasha raadinta maxalliga ahmaxalliga ahdaqiiqadmeelo badanmaareynta warbaahinta bulshadaTwitterYelpdib u eegista